မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ ဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ ဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 10 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား : ဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
Networking IT - Male
Flymya’s operation largely relies on high-quality data analysis and reports. Join the team if you want to become an all-around Data & Reporting professional.
အလုပ်နေရာမရွေး (အိမ်မှာလုပ်ရန်) စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ MMK 600,000 - 800,000
လွန်ခဲ့သော3လ က
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 6,000,000 - 8,000,000
ဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 10
နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း7ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း 1 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 1 ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း 1
ရန်ကုန်9အလုပ်နေရာမရွေး (အိမ်မှာလုပ်ရန်) 1
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ 1 အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 9